Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Marcel Sabitzer Tantara momba ny fahazazana sy Untold Biography Facts
Manomboka, ny anaram-bositra dia ny hoe:Big Sabi". Manome anao ny fandrakofana feno momba an'i Marcel Sabitzer Childhood Tantara, Biography, Family Facts, ray aman-dreny, Fiainana voalohany, fiainana manokana, fiainana ary fiainana hafa faran'izay lehibe hatramin'ny fahazazany ka hatramin'izy nalaza.
Ny fiainana sy ny fiakaran'ny Marcel Sabitzer. Credits sary: ​​Sortitoutsi.
Eny, fantatry ny rehetra fa mpamono zana-tariny izy. Na dia izany aza, vitsy ihany no mihevitra ny dikan-tenin'i Marcel Sabitzer's Biography izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado fanampiny isika, atombohy aloha, amin'ny alàlan'ny tabilao atiny eto alohan'ny FENO Tantara.
Ny tantaran'ny fahazazan'i Marcel Sabitzer:
Manomboka, Marcel Sabitzer dia teraka tamin'ny andro 17 martsa 1994 tao amin'ny tanànan'i Graz any Styria, Aotrisy. Iray amin'ireo zaza tsy latsaky ny roa naterak'i Herfried Sabitzer sy ny reniny.
Tsy misy ny fifanolanana na ady hevitra momba ny zom-pirenen'i Austraniana, indrindra fa raha ny firaketana dia manaporofo fa lehibe tao amin'ny tanàna nahaterahany izy - Graz any Styria, Aotrisy sy ny rahavavy kely iray.
Marcel Sabitzer dia lehibe tao amin'ny tanànan'i Graz any Styria, Aotrisy. Credits sary: ​​WorldAtlas sy Sortitoutsi.
Rehefa lehibe tao Graz dia saika tsy azon'i Marcel ny hilalao baolina. Hanomboka, ny tanàna nahaterahany dia nanana ivom-pivoarana iraisan'ny baolina kitra izay nankasitrahan'ny ankizy kely maniry ny ho lasa mpilalao baolina kitra. Ary ny ray aman-drenin'i Marcel Sabitzer (dadany) dia nanao fanatanjahantena baolina tao amin'ny tanàna iray teo anelanelan'ny 1995-1998.
Fiavian'ny fianakavian'i Marcel Sabitzer:
Football dia voalaza fa mihazakazaka eo amin'ny rà fianakavian'i Marcel Sabitzer noho ny dadan'izy ireo, Herfried Sabitzer. Ny sary eto ambany dia i Herfried izay nilalao ho an'ny klioba Australiana LASK Linz tamin'ny fotoana nahaterahan'ny zanany lahy.
Rain'i Marcel Sabitzer - Mpilalao baolina kitra matihanina i Herfried tamin'ny fotoana nahaterahan'i Marcel. Sary: Youtube.
Tamin'ny alàlan'ny baolina kitra dia afaka nanampy ny fianakaviany izy. Tany am-boalohany dia nandany fotoana tsara i Herfried mba hanampiana ny vadiny hitaiza an'i Marcel vao teraka ary koa mampiditra tsikelikely azy amin'ny baolina alohan'ny hahafahany mianatra mandeha.
Fanabeazana sy fananganana karama:
Tamin'ny faha-5 taonany an'i Marcel dia nitombo haingana dia tsy vahiny amin'ny kinematics, dynamics, toerana sy fotoana voafetra amin'ny baolina kitra izy rehetra, noho ny fanabeazana azony azony tamin'ny dadany.
Ny dadan'i Marcel dia nahita tsara tamin'ny klioba zazalahy Admira Villach izay nilalao baolina kitra teo anelanelan'ny 2000-2001 talohan'ny nidirany an'i Grazer AK nandritra ny 7 taona.
Nandany nandritra ny taona maro ny filalaovany tanora izy nilalao ho an'ny Grazer AK. Sary: FavPNG.
Maty tamin'ny taona voalohan'i Marcel Sabitzer tamin'ny Football:
Rehefa nandao an'i Grazer AK i Marcel dia nanana herintaona nifandimby niaraka tamin'i Austria Wien (2008-2009) talohan'ny nanombohan'ny asany tao amin'ny zotram-po tamin'ny Admira Wacker Mödling tamin'ny taona 2009. Tao amin'ny Admira Wacker Mödling no nananganana an'i Marcel tamin'ny alàlan'ny laharana baolina kitra, mikasa ny tenany amin'ny ekipa voalohany club.
Nanao fisehoana ho an'ny klioba izy nandritra ny taona 2010–11 Australiana Bundesliga ary niditra tamin'ny firaketana an-tsoratra momba ny fifanintsanana amin'ny fandresena tanjona roa. Na izany aza, mbola lavitra ny fahazoana laza i Marcel ary tsy nahatratra ny fotoana fiovan'ny asany.
Admira Wacker izay nanatontosa ny afovoan-tany ho an'ny zokiolona sy ekipa voalohany. Sary: WackerMödling.
Zava-misy momba ny Biography - Lalana ho Fame Tantara:
Ny fiovan'ny asan'ny Marcel tamin'ny taona 2014 rehefa nanao sonia fifanarahana efa-taona niaraka tamin'ny Alemanina RB Leipzig rehefa avy niasa tato anatin'ny iray taona niaraka tamin'i Rapid Wien. Ny zana-dàlana dia nalefa avy hatrany tamin'ny trosa iray taona tany amin'i Red Bull Salzburg. Tao amin'ny klioba dia nanam-potoana i integr tamin'ny fampitana ireo mpiara-miasa taminy i Marcel ary nahita azy niverina niverina tany amin'ny klioban'ny ray aman-dreniny RB Leipzig.
Inona no nahatonga azy tezitra tamin'ny Teammates azy:
Nahatsiaro tena be loatra izy ary nitolona kely mba hifanaraka amin'ny RB Leipzig. Sary: Bundesliga.
Tamin'ny andro voalohan'ny niarahany tamin'i Red Bull Salzburg, dia fantatra fa Australiana be dia be izy, ka tsy hisalasala handefa fahatezerana amin'ireo mpiara-miasa aminy izay nanome azy làlana ratsy. Niditra an-tsehatra mihitsy aza izy niaraka tamin'ny mpiara-miasa taminy nandritra ny fiofanana, fampivoarana nahatonga an'i coach Ralf Rangnick namarana ny fiofanana tamin'io andro io. Raha nanakiana azy ny sasany, ny hafa nahalala fa indray andro any izy dia ho mpitarika lehibe eny an-dàlana.
Zava-misy momba ny Biolojia - Miakatra tantara malaza:
Soa ihany, afaka nandanjalanja ny finiavana i Marcel tsy ho ela ary lasa fananana sarobidy be ho an'ny RB Leipzig izay nohajaina azy noho ny fahaizany namorona tanjona ary naka sombintsombiny mahagaga toy ny David Beckham amin'ny andro taloha.
Tamin'ny vanim-potoana 2019/2020, ny mpanazatra RB Leipzig Julian Nagelsmann nanova ny afovoan'ny fanafihana lehibe. Tsy azo natao mihitsy ny tsy miraharaha ny lalao afovoany tamin'ny volana martsa 2020 taorian'ny nahitany ny lamosin'ny harato indroa nanampy an'i RB Leipzig nandresy tamin'ny 3-0 ny fandresena an'i Tottenham Hotspur tamin'ny lalao Champions League tamin'ny 16.
Jereo hoe iza no nahafahan'i RB Leipzig nandroso hatrany amin'ny ampahefa-dalan'ny fifaninanana Champions League tamin'ny taona 2020. Sary: Goal.
Ny fandresena dia nahita ihany koa ny fandrosoana nataon'i RB Leipzig tamin'ny ampahefatry ny fifaninanana tamin'ny tantaran'ny klioba. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Ilay vehivavy sakaizan'i Marcel Sabitzer, vady ary ankizy:
Noho ny fiakaran'ny lazany sy ny hanaovana anarana ho azy any Eropa, dia azo antoka fa nanontany ny ankamaroan'ny mpankafy ny hoe iza ny sakaizan'i Marcel Sabitzer na raha manambady tokoa izy izay midika hoe efa manambady.
Mifindra amin'ny fiainam-pitiavan'i Marcel dia efa nifandray tsara tamin'ny sakaizany izy Katja Kuhne. Ny lovebirds (Marcel sy Katja) nihaona talohan'ny taona 2016 ary tsy afa-misaraka hatramin'ny fivoriana voalohany, niaraka tamin'ny maro momba ny fifandraisan'izy ireo ho iray amin'ny tsara indrindra amin'ny baolina kitra alemà.
Sarin-tsarin'i Marcel Sabitzer mahafatifaty miaraka amin'i Katja Kuhne, sipany. Sary: Instagram.
Talohan'ny nihaonan'izy ireo voalohany dia ny sipa vadin'i Marcel Sabitzer (Katja Kuhne) dia mpilalao sarimihetsika sy kintana amin'ny fahitalavitra izay nandresy ny fampisehoana RTLNy bachelor”Tamin'ny 2014.
Amin'ny fotoana anoratana, dia samy mivondrona izao izy ireo ary i Katja Kuhne tsy ho ela dia voatonona anarana hoe vadin'i Marcel Sabitzer. Ny marina dia, ny sakaizan'i Marcel Sabitzer dia nanisy tombo-kase ny fitiavany ny kintan'ny baolina noho izy nataony ray aman-dreny tamin'ny zanany vavy Mary-Lou izay teraka tamin'ny taona 2019.
Adidin'i Papa: Efa nahita ity sarin'i Marcel Sabitzer mahafinaritra ity niaraka tamin'i Mary-Lou zanany vavy ve ianao? Sary: Instagram.
Fiainan'i Marcel Sabitzer:
Ao ambadiky ny afovoany rehetra mahomby dia fianakaviana mifanohana ary tsy manilika i Marcel. Amin'ity fizarana ity dia hitondra zava-misy maro kokoa momba ny fianakavian'i Marcel Sabitzer ianao manomboka amin'ny ray aman-dreniny.
Bebe kokoa momba ny Rain'i Marcel Sabitzer:
Ny dadan'i Marcel dia mpilalao baolina kitra matihanina Herfried Sabitzer. Asides ho raim-pianakaviana akaiky sy manohana azy, ny mpanatanteraka dia mpanoro hevitra ary izy no nanampy tamin'ny famelezana mahafaty izay nametrahan'i Marcel ny tombotsoan'ny RB Leipzig.
Herfried Sabitzer dia teraka tamin'ny andro faha-19 Oktobra 1969 tao amin'ny tanànan'i Judenburg any Aotrisy. Tao amin'ity tanàna ity izy dia nanomboka nilalao baolina kitra ho an'ny club zazalahy - SC St Georgen / Judenburg.
Hihaona amin'i Herfried rain'i Marcel Sabitzer. Sary nahazoan-tsary: ​​PlaymakerStats.
Ny asan'ny Herfried dia nanomboka tamim-pahazotoana tao Alpine Donawitz tamin'ny 1990. Avy eo izy dia nilalao baolina kitra ambony ho an'ny klioba Austrian tao amin'ny 13 taona ho avy mandra-pahatongany ho fisotroan-dronono tamin'ny 2003.
Momba ny Renin'i Marcel Sabitzer:
Ny amponga lehibe nandritra ny taona maro dia niteraka zanaka lehibe ary ny renin'i Marcel Sabitzer dia tsy zavatra maningana. Vady tsara amin'ny vadiny izy ary reny manohana ireo zanany.
Nanamarina ny reniny i Marcel noho izy mpiambina ny tropeanany manokana izay ao anaty kaopy ao amin'ny tranon'ny fianakaviana any Aotrisy. Raha ny filazany dia nanadio sy miambina ny fangalany rehetra izy ao anaty kaopy.
Momba ny mpiray tampo sy havan'i Marcel Sabitzer:
Na dia nanonona ny rahavavy kely fantatra iray izay nanampy ny reniny tamin'ny fitandremany ireo trobie nataony aza i Marcel. Na dia ny aza ny afovoan-tany dia mbola milaza na inona na inona momba ny fananana rahalahy.
Toy izany koa, tsy dia fantatra loatra momba ny fiavian'ny fianakavian'i Marcel Sabitzer indrindra fa mifandraika amin'ny raibeny sy renibeny. Amin'ny hazavana mitovy, tsy misy firaketana ireo zanak'olo-mpiray tam-po, zanak'olo, zanak'olo-mpiray tam-po ary nieces.
Na izany aza, manana zanak'olo-mpiray tam-po aminy i Marcel Sabitzer, izay antsoina hoe Thomas Sabitzer izay - tamin'ny fotoana nanoratana dia milalao baolina matihanina ho an'ny LASK ho mpiaro azy. Ny sary eto ambany dia i Marcel Sabitzer izay tena mitovy aminy. Tsy isalasalana fa ny baolina dia mihazakazaka ao amin'ny fianakavian'i Sabitzer.
Hihaona amin'i Thomas Sabitzer zanak'olo-mpiray tam-po amin'i Marcel Sabitzer. Sary nahazoana sary: ​​TransferMarket.
Momba ny fiainam-piainan'i Marcel Sabitzer:
Hanampy anao hahafantatra tsara kokoa ny toetrany ny fahafantaranao ny fiainany manokana. Mifindra amin'ny fiainan'i Marcel Sabitzer tsy lavitra ny baolina kitra dia manana persona manankarena izy ireo izay taratry ny toetra mientanentana, mavitrika, mahatoky ary mamorona ny olona izay manana sonia zodiac.
Ny afovoany izay zara raha mampahafantatra zava-misy momba ny fiainany manokana sy ny fiainany manokana dia manana tombontsoa sy fialamboly izay misy ny mandany fotoana miaraka amin'ny natiora, mihaino mozika ary mihantona amin'ireo namany sy olona ao amin'ny fianakaviany.
Tsy mahagaga raha matetika izy mahita azy mandany fotoana amin'ny natiora. Sary: Instagram.
Momba ny Fiainan'i Marcel Sabitzer:
Voalohany, momba ny fomba niainan'i Marcel Sabitzer, marihina fa manana sanda milentika 10 tapitrisa Euro izy (tamin'ny fotoana nanoratana). Ny fanomezana ny renirano amin'ny fananany haingana dia haingana dia avy amin'ny karama sy karama azony amin'ny filalaovana baolina. Ho fanampin'izay, ny famakafakana ny fahazarana mandany an'i Marcel dia manambara fa lehibe amin'ny fitahirizam-bola amin'ny fizarana vola izy - mariky ny fomba fiaina mangatsiaka.
Ireo izay mahalala an'i ivelan'ny baolina kitra dia nilaza fa tsy sarotra ny misambotra ny afovoan-dehilahy miaina fomba fiaina mahafinaritra. Na dia Marcel mpikarama an-jatony ary manana zavatra ho an'ny trano mahatalanjona sy fiara an-trano. Tiany ny fialan-tsasatra ary tsy olon-tsy fantatra ny mandany fotoana tsara amin'ny sakaizany tsara indrindra (alika).
Tsy fantatsika hoe inona ny mariky ny fiara exotic iray izay idirany ao. Na izany aza, tsapan'ny alika ny fanomezam-boninahitra azy. Sary: WTFoot.
Momba ny zava-misy nataon'i Marcel Sabitzer:
Mba hamonosana ny tantaran'ny fahazazan'i Marcel Sabitzer sy ny tantaram-piainan'ny ankizy, dia tsy misy zavatra fantatra momba azy sy tsy fantatra momba azy.
Zava-misy # 1 - Tattoos:
Miharihary fa i Marcel Sabitzer dia tsy manana fahaizana amin'ny vatana amin'ny fotoana nanoratana. Tiany kokoa noho ny hoditra tsy misy pentina izy amin'ny haavony 5 tongotra sy 10 santimetatra mahavariana.
Photo porofo fa tsy misy tatoazy izy tamin'ny fotoana nanoratana an'io bio io. Sary: Instagram.
Zava-misy # 2 - Tapaky ny karama:
Tamin'ny Aprily 2018, ny Attacking Midfielder dia nanao sonia fifanarahana niaraka tamin'i Red Bull Leipzig, izay nahita azy nanangona karama karama. 4.5 tapitrisa Euro (Pila tapitrisa Million) isan-taona. Manjary izany amin'ny isa kely kokoa, dia mahazo ny karam-karaman'i Marcel Sabitzer isika isan-taona, volana, andro, ora, minitra ary segondra (toy ny tamin'ny fotoana nanoratana).
Per Year € 4,500,000 £ 4,174,747 $5,029,110
isam-bolana € 375,000 £ 347,895 $419,092
Isan-kerinandro € 93,750 £ 86,973 $104,773
Isan'andro € 13,393 £ 12,424 £ 14,967
Per Hour € 558 £ 517.7 £ 623.6
Isaky ny Minut € 9.3 £ 8.63 £ 10.39
Isaky ny segondra € 0.15 £ 0.14 £ 0.17
Toy izao ny vola azon'i Marcel Sabitzer nanomboka tamin'ny nijerena ity pejy ity.
Raha ny vakiteny hitanao eo ambony (0) dia midika hoe mijery pejy AMP ianao. Ankehitriny Click ETO mba hijerena ny fiakaran'ny karamany amin'ny segondra.
Fantatrao ve?… Ny lehilahy antonony any Aotrisy dia mila miasa farafaharatsiny 8.1 taona mahazo € 375,000, izay vola amam-bola azony isaky ny iray volana i Marcel Sabitzer.
Zava-misy # 3 - mifoka sy misotro:
Tsy mifoka sigara i Marcel ary tsy omena zava-pisotro tsy matotra izy satria mahatsiaro foana fa ilaina ny hijanona ho salama ary maranitra mandrakariva.
Fact # 4 - Rating FIFA:
Manana fika mahavariana amin'ny ankapobeny ny FIFA amin'ny 83 hatramin'ny volana Martsa 2020! mahaliana fa ny tarehimarika dia raikitra na aiza na aiza nefa mandra-pahatongany ho 85 ny isa mety ho azony.
Manana salan'asa mahafinaritra izy miaraka amin'ny fanatsarana bebe kokoa. Sary: SoFIFA.
Zava-misy # 5 - Inona ny fivavahan'i Marcel Sabitzer ?:
Ny anaranySabitzer”Dia tsy anarana kristiana, noho izany dia nanapa-kevitra ny hahafahan'ny ray aman-drenin'i Marcel Sabitzer manangana azy ho Kristiana izahay. Ny marina dia ny elanelana midadasika tsy amin'ny fivavahana amin'ny fotoana anoratana. Noho izany, tsy ho fantatra amin'ny fomba miavaka ny fifantohany amin'ny resaka finoana. Na izany aza, ny fahazoana dia mankasitraka azy noho ny tsy mpino.
Wiki's Marcel Sabitzer:
Farany tamin'ny fitanana momba ny Biography an'i Marcel Sabitzer, omenay anao ny knowledgebase wiki anao. Ny latabatra etsy ambany dia hanampy anao hahita vaovao momba azy amin'ny fomba fohy sy mora.
Ny zava-misy momba ny Biography an'i Marcel Sabitzer (Wiki Enquiries)
Anarana feno: Marcel Sabitzer
Daty nahaterahana: 17 Martsa 1994 (25 taona)
Ray aman-dreny: Herfried Sabitzer (Ray) ary reny kely tsy fantatra.
mpiray tam-po: Rahavavy (tsy fantatra anarana)
havana: Thomas Sabitzer (Cousin)
hahavony: 1.78 m (5 ft 10 in)
Partner: Katja Kühne (sakaiza sy ny vady ho)
Weight: 74 kg (stats teo aloha)
Fianakaviana: Graz, Styria, Aotrisy.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaran'ny Marcel Sabitzer Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, miezaka ny hisian ny fahitsiana sy ny rariny isika. Raha mahita zavatra tsy tsara ianao dia miangavy anao hizara izany amin'ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hajainay sy hajainay foana ny hevitrao.
Daty navaozina: 18 jona 2019